I-Diabefarm - imiyalo esemthethweni yokusetshenziswa > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Diabefarm - imiyalo esemthethweni yokusetshenziswa
ukusetshenziswa kwezokwelapha ngomuthi
Igama lokuhweba: I-Diabefarm ®
Igama Lezwe elingafanele: gliclazide
Ifomu lomthamo: amaphilisi
Ithebhulethi eli-1 liqukethe
Into esebenzayo: gliclazide 80 mg
Abahambeli: i-lactose monohydrate (ushukela wobisi), i-povidone, i-magnesium stearate.
Amatafula amhlophe noma amhlophe nge-tint ephuzi aphuzi-acilindrical ane-chamfer kanye nengozi yomumo owenziwe.
Iqembu le-Pharmacotherapeutic: umenzeli we-hypoglycemic wokuphathwa komlomo kweqembu le-sulfonylurea lesizukulwane sesibili
Ikhodi ye-ATX: A10VB09
I-Glyclazide ivuselela ukukhululeka kwe-insulin ngamaseli we-pancreatic β-cell, ithuthukisa umphumela we-insulin-secretory we-glucose, futhi ikhulisa ukuzwela kwezicubu ze-peripheral to insulin. Ivuselela umsebenzi wama-enzymes we-intracellular - synthetase yemisipha ye-glycogen. Yehlisa isikhathi sesikhathi ukusuka ekudleni kuya ekuqaleni kokuthukululwa kwe-insulin. Ibuyisa inani eliphakeme lokuqala le-insulin secretion (ngokungafani nezinye izinto eziphuma ku-sulfonylurea, eziba nomphumela ikakhulukazi esigabeni sesibili soku secretion). Yehlisa ukwanda kwe-postprandial glucose wegazi.
Ngaphezu kokuthinta i-carbohydrate metabolism, ithuthukisa i-microcirculation: inciphisa ukunamathela kwe-platelet kanye nokuhlangana, ivumelane nokuqina kwe-vascular, ivimbela ukuthuthukiswa kwe-micothrombosis ne-atherossteosis, futhi ibuyise inqubo ye-physiological parietal fibrinolysis. Yehlisa ukuzwela kwe-vascular receptor ku-adrenaline. Ibamba ukukhula kwe-retinopathy yesifo sikashukela esigabeni se-ieproliferative. Nge-nephropathy yesifo sikashukela nokusetshenziswa isikhathi eside, kukhona ukwehla okukhulu kobunzima be-proteinuria. Akuholeli ekwenyukeni kwesisindo somzimba, ngoba inomphumela obonakalayo ekuthatheni kokuqala kwe-insulin secretion futhi akubangeli i-hyperinsulinemia, kusiza ukunciphisa isisindo somzimba kwiziguli ezikhuluphele ngokudla okufanele. Inezinto ezilwa ne-atherogenic, yehlisa ukugcwala kwe-cholesterol ephelele egazini.
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, imunca ngokushesha ipheshana lesisu. Ukuqothuka kuphakeme. Ngemuva kokuphathwa ngomlomo kwe-80 mg, ukuqina okukhulu egazini (2.2-8 μg / ml) kutholakala ngemuva kwamahora amane, ngemuva kokuphathwa kwe-40 mg, ukuqina okuphezulu egazini (2-3 μg / ml) kutholakala ngemuva kwamahora we-2-3. ngamaprotheni e-plasma - 85-97%, ivolumu yokusabalalisa - 0,35 l / kg. Ukuhlaziywa ngokulingana egazini kufinyelelwa ngemuva kwezinsuku ezimbili. It is eyenziwe ngesibindi, ngokwakhiwa 8 metabolites.
Inani le-metabolite eyinhloko etholakala egazini ngu-2-3% wenani eliphelele lomuthi othathwe, alinawo umphumela we-hypoglycemic, kepha luthuthukisa i-microcirculation. Ichithwa yizinso - 70% ngesimo sama-metabolites, ngaphansi kwe-1% ngesimo esingaguquki, ngokusebenzisa amathumbu - 12% ngendlela yama-metabolites.
Ukuphila kwengxenye kungamahora ayisishiyagalombili kuya kwangama-20.
Thayipha isifo sikashukela sohlobo lwe-2 kubantu abadala ngokuhambisana nokwelashwa kokudla kanye nokuzivocavoca okulinganiselayo nokugcina kungasebenzi.
I-Hypersensitivity to the drug, thayipha i-1 isifo sikashukela, i-ketoacidosis yesifo sikashukela, isifo sikashukela, ukuqina kwesifo sikashukela, i-hyperosmolar coma, i-hepatic ezinzima kanye / noma ukuhluleka kwezinso, ukungenelela okukhulu kokuhlinzwa, ukusha okukhulu, ukulimala kanye nezinye izimo ezidinga ukwelashwa kwe-insulin, ukuvinjwa kwamathumbu, i-paresis isisu, izimo ezihambisana nokukhubazeka kokudla, ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia (izifo ezithathelwanayo), i-leukopenia, ukukhulelwa, ukuncelisa, izingane ozrast iminyaka engu-18.
Ngokunakekela (isidingo sokuqapha ngokucophelela nokukhethwa komthamo) sibekelwa isifo se-febrile, udakwa kanye nezifo ze-thyroid (ngomsebenzi okhubazekile).
Umuthi uphambaniswe ngesikhathi sokukhulelwa nangesikhathi sokudla.
Lapho ukukhulelwa kwenzeka, umuthi kufanele umiswe ngokushesha.
Umthamo womuthi ubekwa ngawodwana, kuye ngeminyaka yesiguli, ukubonakaliswa komtholampilo kwalesi sifo kanye nezinga lokuzila okushukela kwegazi namahora ama-2 ngemuva kokudla. Umthamo wokuqala wansuku zonke ngu-80 mg, umthamo ojwayelekile wosuku ngu-160 mg, kanti umthamo wansuku zonke ophakeme ungama-320 mg. I-Diabefarm ithathwa ngomlomo izikhathi ezi-2 ngosuku (ekuseni nakusihlwa) imizuzu engama-30-60 ngaphambi kokudla.
I-Hypoglycemia (uma kwenzeka wephula imithamo yemithamo nokudla okwanele): ikhanda, ukuzizwa ukhathele, indlala, ukujuluka, ubuthakathaka obukhulu, ukufutheka, ukukhathazeka, ukungaxhamazeli, ukwehla kokugxila kanye nokubambezeleka kokulibala, ukudangala, ukungaboni kahle, i-aphasia, ukwethuka, ukuphazamiseka kwemizwa, isiyezi , ukulahlekelwa ukuzithiba, ukukhohlisa, ukwehluleka, i-hypersomnia, ukulahlekelwa ukwazi, ukuphefumula okungashisi, i-bradycardia.
Ukuphendula komzimba: ukulunywa, i-urticaria, ukuqhuma kwe-maculopapular.
Kusuka kuzitho ze-hemopoietic: i-anemia, i-thrombocytopenia, i-leukopenia.
Kusuka ohlelweni lokugaya: i-dyspepsia (isicanucanu, isisu, umuzwa wobunzima e-epigastrium), i-anorexia - ubukhulu bokwehla lapho buthathwa ngokudla, ukungasebenzi kahle kwesibindi (i-cholestatic jaundice, umsebenzi owandayo we-"sesibindi" transaminases).
Izimpawu: hypoglycemia kungenzeka, kuze kube sekuthuthukisweni kwe-hypoglycemic coma.
Ukwelashwa: uma isiguli sazi, thatha kalula ama-carbohydrate ashukela (ushukela) ngaphakathi, esinokuphazamiseka kwengqondo, isixazululo se-40% dextrose (ushukela) siphathwa kahle, i-1-2 mg ye-glucagon intramuscularly. Ngemuva kokuthola ukwazi kabusha, isiguli kufanele sinikezwe ukudla okunothe kalula kuma-carbohydrate agayekayo (ukugwema ukwakhiwa kabusha kwe-hypoglycemia). Nge-edema yobuchopho, i-mannitol ne-dexamethasone.
I-Angiotensin-converting enzyme inhibitors (Captopril, enalapril), i-H2-histamine receptor blockers (cimetidine), izidakamizwa ze-antifungal (miconazole, fluconazole), izidakamizwa ezingezona ze-steroidal anti-immune (phenylbutazoflubrate, indigo), zivimbela umphumela we-hypoglycemicma we-Diabefensma. (ethionamide), salicylates, coumarin anticoagulants, anabolic steroid, beta-blockers, cyclophosphamide, chloramphenicol, monoamine oxidase inhibitors, su fanilamidy nokunwetshiwe isinyathelo, fenfluramine, fluoxetine, pentoxifylline, guanethidine, theophylline, izidakamizwa ukuthi uvimbele ijabulise uketshezi, reserpine, bromocriptine, disopyramide, pyridoxine, allopurinol, Ethanol futhi etanolsoderzhaschie amalungiselelo, kanye nezinye izidakamizwa hypoglycemic (acarbose, biguanides, insulin).
Silahlekelwe ngumphumela we-hypoglycemic we-Diabefarma barbiturates, glucocorticosteroids, sympathomimetics (epinephrine, clonidine, ritodrine, salbutamol, terbutaline), phenytoin, slowly calcium block blockers, carbonic anhydrase inhibitors, thiazide azole diateaneateole diateaneateole diateane diole diateane diolebeate diateane. , i-diazoxide, i-isoniazid, i-morphine, i-glucagon, i-rifampicin, ama-hormone egilo, usawoti we-lithium, kumithamo ephezulu - i-nicotinic acid, i-chlorpromazine, ama-estrogens kanye nezindlela zokuvimbela inzalo zomlomo eziqukethe.
Lapho uxhumana ne-ethanol, ukusabela okufana ne-disulfiram kungenzeka.
I-Diabefarm yandisa ubungozi be-extricasy extricus ngenkathi kuthatha i-glycosides ye-cardiac.
I-Beta-blockers, i-clonidine, i-reserpine, i-guanethidine ingavimba ukubonakaliswa komtholampilo kwe-hypoglycemia.
Imithi evimbela i-mar mar hematopoiesis ikhulisa ubungozi be-myelosuppression.
Ukwelashwa kwe-Diabefarm kwenziwa ngokuhlanganiswa nekhalori ephansi, yokudla okuphansi kwe-carb. Kuyadingeka ukubheka njalo okuqukethwe ushukela egazini esiswini esingenalutho nangemva kokudla.
Endabeni yokungenelela kokuhlinzwa noma ukubola kwesifo sikashukela, kuyadingeka ukubheka ukuthi kungenzeka yini ukusebenzisa amalungiselelo e-insulin.
Kuyadingeka ukuxwayisa iziguli ngengozi eyandayo ye-hypoglycemia uma kwenzeka uthatha i-ethanol, izidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala, indlala. Endabeni ye-ethanol, kungenzeka futhi ukuthi ube ne-disulfiram-like syndrome (ubuhlungu besisu, isicanucanu, ukuhlanza, ikhanda).
Kuyadingeka ukulungisa umthamo womuthi ngokweqile ngokomzimba noma nangokomzwelo, ushintsho ekudleni
Okuzwela ikakhulukazi isenzo sezidakamizwa ze-hypoglycemic abantu asebekhulile, iziguli ezingakutholi ukudla okulinganiselayo, iziguli ezibuthakathaka, iziguli ezihlushwa ukungapheleli kwepituitary-adrenal.
Ekuqaleni kokwelashwa, ngesikhathi sokukhethwa komthamo weziguli othambekele ekuthuthukisweni kwe-hypoglycemia, akunconywa ukuthi ubandakanyeke emisebenzini edinga ukunakwa okwandisiwe nesivinini sokuphendula kwengqondo.
Amaphilisi we-80 mg
Kumatafula ayi-10 ahlanganiswe emgqeni wefreyimu evela kufilimu ye-polyvinyl chloride ne-aluminium foil varnished.
Ama-3 noma ama-6 ama-blits anemiyalo yokusetshenziswa afakwa kwiphakethe lekhadibhodi.
Uhlu B. Endaweni eyomile, emnyama ngamazinga okushisa angekho ngaphezu kwama-25 ° C.
Gwema kude nezingane.
Imibandela Yeholide Lokhemisi
Izimangalo kufanele zibhekiswe kumenzi:
I-FARMAKOR PRODUCTION LLC, eRussia
198216, iSt. Petersburg, iLeninsky Prospect, d.140, lit. F
Ngo-194021, iSt. Petersburg, iMurinsky Prospect, engu-41, i-lit. A